Maxkamad Ku Taalla Dalka Ingiriiska Oo Jabuuti Ku Amartay In Aanay Ka Bixin Heshiiskii Ay La Gashay Dp-World | Berberatoday.com
Maxkamad Ku Taalla Dalka Ingiriiska Oo Jabuuti Ku Amartay In Aanay Ka Bixin Heshiiskii Ay La Gashay Dp-World
UK(Berberatoday.com)-Maxkamadda sare ee England Iyo Wales ayaa go’aan ay ka soo saartay khilaafka u dhexeeya Jabuuti iyo Dp-World, waxay ku amartay hay’adda marsooyinka dalka Jabuuti inay joojiso inay ka baxdo heshiiskii hore u dhexeeyey shirkadda DP World.
Maxkamadda sare ee England iyo Wales ayaa waxa kale oo ay ka hor istaagtay hay’adda marsooyinka Jabuuti in ay erido Agaasimeyaasha terminalka kontaynarrada ee Dooraale.
Maxkamaddu waxaanay ku amartay hay’adda marsooyinka Jabuuti ee magaceeda loo soo gaabiyo PDSA in aanay wax faro-gelin ah ku samayn maamulka terminalka kontaynarrada ee Dooraale ilaa iyo amar dheeraad ah uu maxkamadda ka soo baxo, amase maxkamadda dhexdhexaadinta ee fadhigeedu yahay London ay xal ka gaadho khilaafkani.
Hay’adda marsooyinka Jabuuti waxa inteeda badan leh xukuumadda Jabuuti, qofka madaxda ka ahina waa guddoomiyaha maamulka dekedaha iyo aagagga ganacsiga xorta ah ee Jabuuti.
Saamiyada laga tirada badan yahay ee PDSA waxa leh China Merchants oo fadhigoodu yahay Hong Kong.
Amarka maxkamadda sare ayaa daba socda ka dib markii PDSA ay joojisay heshiiskii ay shuraakada kula aheyd DP World, iyo qabashada shirka aan caadiga aheyn ee ay isugu yeedhay hay’adda marsooyinka Jabuuti (PDSA) 9ka bishan Sagaalaad ee 2018, si loo beddelo Agaasimeyaashii ay usoo magacawday shirkadda DP-World Terminalka Kontaynarrada Dooraale oo ay labada dhinac shuraakada ku ahaayeen.
Dhinaca kalena, Guddoomiyaha dekedaha iyo goobaha canshuuraha ka caaggan ee dalka Jabuuti, Abuubakar Cumar Xaddi, ayaa waxa uu hore ugu gacan saydhay go’aankii maxkamadda dhexdhexaadinta ka soo baxay, isagoo sheegay in aanu wax saamayn ah ku yeelan doonin shaqada Terminalka Kontaynarrada ee Dekeda Dooraale.
Ugu dambayntiina, waxa xusid mudan in Maxkamaddu hay’adda Marsooyinka dalka Jabuuti u qabatay in ilaa 14ka bishan sagaalaad ee 2018 in difaaceeda ay maxkamadda la hor tegto, markaasi oo dhegaysi kale loo fadhiisan doono.
Waa markii saddexaad ee ay maxkamaddi go’aan ka soo saarto khilaafka u dhexeeya dalka Jabuuti iyo Dp-world.